Shiinaha Cold diidanaa in la xirrira isticmaalka mashiinka ee saarayaasha nolosha iyo alaab | Zhongtuo
Marka ay timaado in erayada rogid qabow mashiinada la xirrira, inta badan dadka aan aqoon. Laakiin marka ay timaado in dhismaha guryaha, ee maalin kasta aan ma ka bixi kartaa. Qaado mashruuca Brazile ah tusaale ahaan ah si ay u muujiyaan, mashiinada sida imporant rogid qabow la xirrira yihiin.
Brazil ayaa meel dhulka guud ee 8.547.400 kiiloomitir oo laba jibbaaran (46% aagga South America ee), darajada shanaad ee dunida; dadka ka mid ah 202 million, waa dal Mucjizaad cad ee Latin America. kaydka iron ore Brazil ee falan shanaad ee dunida, waana dhoofisaa dunida ee labaad ee ugu weyn ee iron ore. wax soo saarka ee bauxite waa labaad oo kaliya in ay Australia, la iman kara warshadaha xoog leh. minerals ayaa sida uranium, manganese iyo nickel sidoo kale waxay leeyihiin kaydka weyn iman kara. khayraadka biyaha saafiga ah warsan oo ku saabsan 12% ka mid ah ilaha biyaha saafiga ah ee caalamka. Brazil waa soo saare aduunka ee bunka ugu weyn oo u dhoofisaa oo loo yaqaan "boqortooyada kafeega". Brazil ayaa sidoo kale soo saare ee dunida ugu weyn oo sonkor ah iyo dhoofinta, soo saare ka Landkruusaro labaad ee ugu weyn oo u dhoofisaa, iyo soo saare hadhuudh saddexaad ee ugu weyn. Dhoofinta Corn ka mid ah shanta kooxood ee ugu sareysa aduunka iyo dhoofinta ee dunida ugu weyn ka mid ah lo'da iyo digaag falan.
Laakiin inta badan garaadka Shiinaha, Brazil waa waddan daad of daroogada, dhac joogto ah, iyo dawlada aad u kharriban leh.
Habeenka September 2, 2018, dab ka qarxay Museum Qaranka ee Brazil ee Rio, Iyo dabka socday muddo habeenkii halaagnay 20 million ururinta. Sababta dabka hore ahaa in kharashka matxafka ayaa fidiyey, dhismaha ku jiray burbur, iyo madxafka oo ku jira kiimikada ololi kara laakiin ma lahayn nidaamka difaaca dabka ah. Laakiin dhab ahaantii, waayaha of this dhismaha taariikhi ah Portuguese 200-sano jir ah si hufan waa qormo cad oo bixitaankii iyo dhicitaankii ee dalka: jahwareer siyaasadeed, tabar dhaqaale, Brazil waa khayraadka xoogan, lakiin ma uusan awoodin in laga takhaluso oo ka mid ah " dabin dhexe dakhliga ", xitaa qiimeynta dhaqaalaha caalamiga ah muunad ka mid ah dalalka in si joogto ah marwalba sii.
Dabcan, macluumaadka kor ku xusan waxba u qaban la this article. Maanta, by muujinaya mashruuc maxaliga ah homestay yar (ama dalxiis noqosho), eegno shabeel oo la arko codsiga of steel khafiif ah ee Brazil.
waqti Post: Nov-07-2018
Stud Track Machine, waxaad huwataa Birta U samaynta Makiinado , Rolling shutter Door Roll U samaynta Samaynta Makiinado , Sheet saqafka Machine Making Tile, Line Tube Hg50, Machine Step Making Tile ,